ဆက်ဆံရေး | Reward ဖောင်ဒေးရှင်း၊ အချစ်၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
"အချစ်ဆိုတာဘာလဲ?" ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အသုံးအများဆုံးရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ” ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင် ၇၅ နှစ်ကြာသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည့် Grant လေ့လာမှု၏နိဂုံးမှာ“ ပျော်ရွှင်မှုသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်” ဖြစ်သည်။ Grant လေ့လာမှုကနွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးသည်ကျန်းမာရေး၊ ကြွယ်ဝမှုနှင့်ရှည်လျားသောအသက်တာအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေခံဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, စွဲ, စိတ်ကျရောဂါနှင့် neurosis ဒီအလိုချင်ဆုံးပြည်နယ်မှအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်ကြသည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်များကိုနားလည်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုမှရှောင်ကျဉ်။ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာမတွေ့လိုပါကအရေးကြီးသည်။
ဤအပိုင်းကိုအတွက်ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှလူတွေကသူတို့ဘဝတလျှောက်လုံးဆက်ဆံများစွာကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေစူးစမ်း။ အဘယ်အရာကိုဆက်ဆံရေးအလုပ်လုပ်စေသည်? သင်ဘယ်လိုမေတ္တာ၌မေတ္တာနှင့်နေကျနိုင်သလဲ သငျသညျထ trip စေခြင်းငှါ, သောထောငျခြောဘာတွေလဲ?
ကျနော်တို့အောင်မြင်သောဆက်ဆံရေး၏သိပ္ပံအာရုံစိုက်ပါ။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်နားလည်နိုင်ရန်အတွက်ဇီဝဗေဒနှင့် ဦး နှောက်သိပ္ပံပညာကိုလေ့လာရန်လိုသည်။ Coolidge Effect သည်အထူးသဖြင့်အင်အားကြီးမားသည်။
• မတ်ေတာ, လိင်နှင့်အင်တာနက်
• Bond အဖြစ်မတ်ေတာသညျ
• Pair ကို Bond စုံတွဲများ
• လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အဖြစ်မတ်ေတာသညျ
• အဆိုပါ Coolidge Effect
• လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့ကျလာ
• လိင် & Porn